हेभी इक्युप्मेन्ट अपरेटरको चरम अभाव, तालिम लिएर कमाउनुहोस् महिनाको ६० हजार !
रोजगारीको अभावमा नेपालबाट बर्सेनि हजारौं युवा विदेसिइ रहेका छन्। सिपमुलक तालिमको अभाव तथा नेपालमा थोरै पारिश्रमिक भएकाले विदेसिन बाध्य भएको कतिपयको बुझाई छ। विदेस पुगेपछि मासिक ३०/३५ हजारको लागि १२ देखि १४ घण्टासम्म काममा खट्ने गरेका छन्।
तर नेपालमै उत्कृष्ट सम्भावना भएको रोजगारीमा भने धेरैको ध्यान जान सकेको छैन। नेपालमा अहिले निर्माण क्षेत्रमा ब्यापक काम भइरहेका छन्। अझ भूकम्पपछि त हेभी इक्युप्मेन्टको संख्या बढेसँगै त्यसमा काम गर्नेहरु पाउन मुश्किल परेको सम्वद्ध निर्माणकर्मी बताउँछन्।
अहिले हेभी इक्युप्मेन्ट बढेसँगै जनशक्तिको चरम अभाव भएको नेपाल हेभि इक्युप्मेन्ट व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा ब्याक लोडर, एक्साभेक्टर, ग्रेडर, रोलर, डोजर, कम्प्याक्टर, ग्रेडर जस्ता साधनमा अपरेटरहरुको उच्च माग रहेको हेभी कन्ट्रक्सन इक्युप्मेन्ट तालिम दिने संस्था युसेप, नेपालका इन्स्ट्रक्टर प्रमोद सत्यालले बताए।
यी इक्युप्मेन्ट चलाउनको लागि १ महिना अथवा १ सय ६० घण्टाको ट्रेनिङ हुने सत्यालले जानकारी दिए। नेपालमा सामान्यतया अपरेटरहरुको तलब ८ देखि १० हजार र दैनिक १५ सय भत्ता हुने नेपाल हेभी इक्युप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तारा बहादुर कुँवर बताउँछन्।
जसअनुसार नेपालमै हेभी इक्युप्मेन्ट तालिम लिएर काम गर्ने हो भने पनि ३० देखि ६० हजार सम्म सजिलै कमाउन सकिने देखिन्छ। त्यस्तै यस्ता तालिम लिएर विदेशै गए पनि कम्तीमा मासिक १ लाखसम्म कमाइ हुने जानकारहरु बताउँछन्।
कमाइ राम्रो भएपनि यो क्षेत्रमा निकै कम दक्ष जनशक्ति भएको र भएकाहरु पनि विदेशिएकाले कतिपय ठाउँमा भारतबाट आएर अपरेटरको रुपमा नेपालमा काम गरिरहेका छन्। २०७२ पछि नेपालमा हेभी इक्युप्मेन्टको माग करिव ५० प्रतिशत बढेको महासंघका अध्यक्ष तारा कुँवरको दावी छ।
माग अत्याधिक बढे पनि अपरेटरको अभावले मेसिन थन्काएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको कुँवरले गुनासो पोखे। ‘मेसिन त बरु अभाव भए सजिलै किनेर ल्याउँछौँ, तर अहिले जनशक्ति नै अभाव भएकाले भएका उपकरण पनि चल्न सकेका छैनन्’ उनले भने। त्यो सँगै मेकानिकको अभावले मेसिन बिग्रिएपछि बनाउन अत्यन्तै कठिनाई हुने गरेको उनले बताए।
नेपाली युवाहरु सानोतिनो काममा खाडि जानुको सट्टा नेपालमै हेभी इक्युप्मेन्टको तालिम लिएमा स्वदेशमै बसेर बिदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने कुँवर दावी गर्छन्। नेपालमा अहिले करिव १४ हजार मेसिन रहेको र त्यसमा करिव ५ हजार अपरेटर र मेकानिक अभाव भएकाले थन्केर बसेको उनले जानकारी दिए। ‘उपकरण थन्किरहेपछि कतिपय त बिग्रेका पनि होलान्’ उनले भने।
यदी अपरेटरको रुपमा काम गर्ने तिव्र इच्छा छ भने पनि तालिम लिएर जोकोहीले गर्न सक्ने उनले बताए। हेभी इक्युप्मेन्ट अपरेटरको रुपमा तालिम लिएर अपरेटरका रुपमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनेका लागि युसेप नेपालको सहकार्यमा तालिम दिने गरिएको छ। इच्छुक युवाले ०१–५१८४२८८ मा सम्पर्क गरी तालिम लिन सक्नेछन्। ‘निश्चित समयमा तालिम दिएर युवाहरुलाई दक्ष बनाउने काम पनि गरिन्छ, दक्ष बनिसकेपछि यस क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ’ कुँवरले भने।
यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता हेभी इक्युप्मेन्टको लाइसेन्स लिन २ वर्षअगाडि नै ‘लाइट’ (हलुका) गाडीको लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने नियम राखेकोले अत्याधिक समस्या भएको कुँवरको गुनासो छ।
‘विभागले पैसा खुवायो भने सजिलै लाइसेन्स दिन्छ, खुवाएन भने विभिन्न सरकारी अड्चनहरु निकाल्छ’ उनले आक्रोशित हुँदै भने। हेभी इक्युप्मेन्टको लाइसेन्स लिनुपुर्व लाईट गाडीको लाइसेन्स लिनुपर्ने नियम निकै अव्यवहारीक भएकोले अपरेटरको सिप हेरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको विचार छ।
सिप भएकाहरुलाई विभागले सहज रुपमा लाइसेन्स दिएमा नेपालीहरुको रोजगारी बढ्नुका साथै बिना लाईसेन्सका अपरेटरलाई करोडौंको मेसिन जिम्मा दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको बाध्यता हट्ने उनको भनाई छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १४, २०७४ १०:४२:२३
एसियाको उत्कृष्ट रोजगारदाता अवार्डबाट चौधरी ग्रुप सम्मानित
बेरुजू फर्छ्यौट नगर्ने सरकारी निकायका प्रमुखको सरुवा बढुवा रोकिने
वैदेशिक रोजगारसम्वन्धी नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आउँदै, के छ व्यवस्था ?
भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण १९ सय जना कोरिया जान नपाउने
कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)